ऊर्जा विकास तथा उपयोगमा लैंगिक असमानता : एडिबी - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
ऊर्जा विकास तथा उपयोगमा लैंगिक असमानता : एडिबी
फागुन १७, २०७४ 1149 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपालको ऊर्जा विकास, उपयोग, सहभािगता र यसको लाभ बाँडफाँडमा लैंगिक असमानता कायम रहेको देखिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गरेको एक अध्ययनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।
‘ऊर्जा क्षेत्रमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीता’ शीर्षकमा गरिएको अध्ययनअनुसार देशका अधिकांश महिला, गरिब र सीमान्तकृत समुदाय ऊर्जाबाट पाउनुपर्ने लाभबाट बञ्चित छन् । ग्रामीण र दुर्गम गाउँमा अझै पनि ऊर्जाको परम्परागत स्रोत उपयोग हुँदै आएको छ । यसले महिलाको स्वाथ्यमा प्रतिकूल असर गरेको उल्लेख छ ।
गरिबीका कारण लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा भौगोलिकरूपले आधुनिक ऊर्जामा पहुँच पुग्न नसकेको अध्ययनको निचोड छ । उचित नीति र प्रभावकारी संस्थागत संरचनाले मात्र ऊर्जा क्षेत्रको लैंगिक र सामाजिक समावेशितालाई संबोधन गर्न सक्ने औंल्याइएको छ ।
लैंगिक समानता कायम भए गरिबी निवारण, सामाजिक लाभ, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सुधार, ऊर्जा विकासमा स्तरोन्नती हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा अझै पनि करिब ८० प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा लगायत) प्रयोग हुँदै आएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेिशताबारे गरिएकाे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदै । तस्बिर : एडिबी
अध्ययनका क्रममा १२ निर्माणाधीन तथा निर्माण पूरा भएका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण लाइन, सोलार, वायु ऊर्जा आयोजना समावेश गरिएको छ । यस्तै, करिब ९० जनासँग अन्तर्वार्ता, ८ लक्षित समूहसँग छलफल र ३१ ठाउँको अध्ययन गरिएको एडिबीले जनाएको छ ।
एडिबीकै सहयोगमा अध्ययन भइरहेको ३ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, निर्माणाधीन १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र सञ्चालनमा रहेको ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो ।
दाना–कुश्मा १३२ केभी र ४ स केभी दुहबी–ढल्केबर तथा निर्माण पूरा भएको २२० केभी खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन अध्ययनमा समावेश थिए । यस्तै, कैलालीको घोडाघोडी वितरण प्रणाली, किसेदी खोला लघुजलविद्युत् आयोजना र नवलपरासीको धौबडीमा निर्माण भएको हाइब्रिड वायु सोलार पनि अध्ययनमा परेका छन् ।
उल्लेखित सबै आयोजनामा महिला, जनजाति तथा पछाडि परेका समुृदायको सहभागिता न्यून रहेको उल्लेख छ । यद्यपि, ऊर्जा पूर्ण प्राविधिक क्षेत्र भएकाले शिक्षा, ज्ञान, सिकाइ तथा अनुभवले धेरै काम गर्ने गर्छ । लैंगिक समानता कायम गर्न शिक्षा र कम अनुभवी महिला तथा पछाडि परेको समुदाय सहभागी गराउँदा लक्षित उपलब्धि हासिल नहुन पनि सक्छ ।